Iindaba -Uxinzelelo lonyango lobushushu kunye nokuhlelwa kwesithuthuthu esirhuqwayo
Uxinzelelo lonyango lobushushu lunokwahlulwa lube luxinzelelo lwe-thermal kunye noxinzelelo lwethishu. Unyango olushushu lonyango olusebenzayo lusisiphumo sokudityaniswa koxinzelelo lwe-thermal kunye noxinzelelo lwethishu. Imeko yoxinzelelo lonyango lobushushu kwindawo yokusebenza kunye nefuthe elibangelwayo lahlukile. Uxinzelelo lwangaphakathi olubangelwa kukufudumeza okungalinganiyo okanye ukupholisa kuthiwa luxinzelelo lwe-thermal; uxinzelelo lwangaphakathi olubangelwa lixesha elingalinganiyo lenguqu yethishu ibizwa ngokuba luxinzelelo lwethishu. Ukongeza, uxinzelelo lwangaphakathi olubangelwa lutshintsho olungalinganiyo lolwakhiwo lwangaphakathi lomsebenzi lubizwa ngokuba luxinzelelo olongezelelekileyo. Isimo sokugqibela soxinzelelo kunye nobungakanani boxinzelelo kwindawo yokusebenza emva konyango lobushushu kuxhomekeke kwisibalo soxinzelelo lwe-thermal, uxinzelelo lwethishu kunye noxinzelelo olongezelelekileyo, olubizwa ngokuba luxinzelelo lwentsalela.
Ukuphazamiseka kunye nokuqhekeka okwenziwe kukusebenza ngexesha lonyango lobushushu ziziphumo zempembelelo ezidibeneyo zolu xinzelelo lwangaphakathi. Kwangelo xesha, phantsi kwempembelelo yoxinzelelo kunyango, ngamanye amaxesha enye indawo yomsebenzi ikwimeko yoxinzelelo, kwaye elinye icala likwimeko yoxinzelelo, ngamanye amaxesha ukusasazwa kwengcinezelo kwimeko nganye Umsebenzi unokuba nzima kakhulu. Oku kufuneka kuhlalutywe ngokweyona meko.
1. Uxinzelelo lobushushu
Uxinzelelo lwe-Thermal luxinzelelo lwangaphakathi olubangelwa kukwanda okungalinganiyo kwevolumu kunye nokuncipha okubangelwa ngumahluko kubushushu okanye kwinqanaba lokupholisa phakathi komphezulu womsebenzi kunye neziko okanye iindawo ezincinci nezityebileyo ngexesha lonyango lobushushu. Ngokubanzi, ngokukhawuleza isantya sokufudumeza okanye sokupholisa, kokukhona uxinzelelo lwe-thermal luveliswa.
2. Uxinzelelo lwethishu
Uxinzelelo lwangaphakathi oluveliswa lixesha elingalinganiyo lotshintsho oluthile lwevolumu olubangelwa kukutshintsha kwesigaba kuthiwa luxinzelelo lwethishu, ekwabizwa ngokuba luxinzelelo lwenguqu yesigaba. Ngokubanzi, isixa esikhulu somthamo othile ngaphambi nasemva kotshintsho lobume bethishu kwaye mkhulu umahluko wexesha phakathi kotshintsho, kokukhona uxinzelelo lweethishu lukhulu.